COLONY APPLE: TALOOYINKA GUUD EE QORSHEYNTA IYO DARYEELKA - GEED GEEDEEDKA
Tufaax Kolonovidnye: beeritaanka, daryeelka, manjooyin
Dhibaatada weligeed ah ee dadka deggan xagaaga waa meel bannaan. Waxaan doonayaa in aan soo saaro wax badan, laakiin goobta ayaa xuduud u ah, waxaad u baahan tahay inaad si taxadar leh u qorsheyso qaybinta aagga. Haddii ay suurtagal tahay in la sameeyo tijaabooyin beerta ugu yaraan sannad kasta, lambarkan ma shaqeyn doono beerta.
Geed kasta wuxuu u baahan yahay boos ku filan nidaamka xididka iyo taajka. Xaaladaha noocaas ah, waxaa jira geedo midho leh oo midabyo leh, kuwaas oo qaadanaya boos yar sababtoo ah xaqiiqda ah in ay leeyihiin hal sanduuq iyo aan lahayn taaj. Maqaalkani wuxuu kuu sheegi doonaa sida loo kori doono tufaax qori ah iyo sida loo daryeelo.
Colony Apple: Tafaasiisha Guud
Kolonovidnye, ama geedaha tufaaxa ee Pyramidal ayaa u muuqday badhtamihii qarnigii ugu dambeeyay ee ka dhalatay gardarrada kala duwan, taas oo muujisay inay ku hawlan yihiin doorashadooda. Tufaaxa suugaantu wuxuu leeyahay hal garbeed, halkii, halkii caleemaha Kolchatka, geed miro ah iyo warmo, taas oo abuurista burooyinkeeda ubaxa ah. Fruiting ayaa celcelis ahaan ah 15 sano.
Ma taqaanaa? Beeraley, oo helay khabiir qariib ah, waxaa loo yaqaan 'Viichik,' iyo geedkiisa tufaaxa ee qarnigii badhkeed oo leh laan aan caadi ahayn Macintosh. Sidaa darteed, kala duwan ee ugu horeysay ee beeritaanka columntel waxaa loo yaqaan "Mac Vitochik". Laakiin ereyga Ruushka, magacu wuxuu udhigmaa "Hogaamiyaha Macintoshka".
Cabbiraadda ee tufaax colon ah waa in aan ka weyneyn sanad, haddii kale waxay ka sii xumaan doontaa in xididka. Haddii aad dhirato dhowr dhir ah, waxaad u baahan tahay inaad ku haysato masaafo hal mitir ah oo mitir u dhaxaysa midba midka kale.
Tufaax alwaaxda ah ma jecla:
ku dhowaad dhulka biyaha.
Si aad u hesho dalag sare oo tayo sare leh oo tufaax ah, waxaad u baahan tahay inaad ogaatid sida loo ciribtiro geedaha tufaaxa ee caleenta beerta, si taxadar leh u daryeeli oo loola dagaallamo, iyo la dagaallama cayayaanka iyo cudurrada.
Qorraxda ama hooska
Tufaaxa columnoll waa in lagu dhex beeray meeshii laga heli lahaa qorraxda ku filan, maxaa yeelay waa mid aad u iftiimiya. Fikrad ahaan u dhig meel u dhow derbiga koonfureed ee guriga si qorraxda, ka soo jeeda bari iyo galbeed, waxay iftiiminaysaa maalinta oo dhan. In hooska of tufaax columnbar ayaa si adag loo soo saaray.
Xeerarka guud ee degitaanka
Dhirta tufaaxa-qaabaysan, sida geedo midhaha oo dhan, waxaa lagu beeray guga, ka hor inta casiir dabacsan. Hase yeeshe, waa in la abuuro tufaax qori ah xilliga dayrta, waa mid la doorbidi karo, waxay siin doontaa warshadda fursad ay kula qabsato oo ay dhaafto.
Ma taqaanaa? Haddii aad ku iibsato geedo ku jira tuubo, waxaad dhali kartaa geedo midab leh oo midab-kala-bax leh oo leh dhoobo dhulka ah xagaaga.
Sida loo aasayo tufaax dhegaysiga, tallaabo tallaabo tallaabo ah.
Toddobaadyadii la soo dhaafay, u samee god si aad uhesho. Waa in uu ahaado qoto dheer, mitir qoto dheer, ballaaran oo dheer. Marka qodo, ciidda bacrin ah waa in si gooni ah loogu duubaa carrada madow.
Geli dhoobada iyo qasitaanka ciidda hoose ee ceelka.
Isku qas qaybta bacriminta ee ciidda leh 30-40 litir oo ah humus ama compost, ku dar 100 g of superphosphate iyo bacriminta potash, 100 g oo ah burka dolomite hoosta ah ee carrada acidic, qaso iyo jiifay godadka. Fasax laba toddobaad.
Geedka geedka tufaaxa ah ee ciidda diyaarka ah, ku dabool carrada caleenta ceelka, adoo hubinaya in daboolka xididka uu ka sareeyo dusha sare.
Calaamadee dalool geed, ku shub labo baaldiyo oo biyo ah.
Kadib markii aad biyo ku qulqulayso, bilow wareegga foosto. Wixii mulching cawska ku habboon, peat, sida balka.
Geedka geedka ku xir, haddii loo baahdo.
Waa muhiim! Inta lagu jiro gaadiidka, xididdada seedling waa in aan qalalaan!
Marka beerto gu'ga, godadka waa in la diyaariyaa xilliga dayrta, si ay Bacriminta u milmaan, xayawaanka ciidda iyo xididdada ku dhacaan jawi wanaagsan.
Ma taqaanaa? Noocyada Coloniform ee dhirta tufaaxa waa skoroplodny aad u: a seedling lagu beeray guga karaa Bloom ugu sannadka ugu horeeya. Xaaladdan oo kale, waxaa fiican in si buuxda looga saaro ugxan si markaasi geedka si buuxda ula qabsado loona helo awood.
Sida loo daryeelo geedaha, talooyin ku saabsan sii kordhaya
Dhirta tufaaxa ee qaabka loo qurxiyo waxay u muuqdaan kuwo aad u fiican, beertooda waa iswaji waxayna qaadataa meel yar, waxay siiyaan beergoos wanaagsan, laakiin waxay u baahan yihiin dayactir taxaddar leh, waraabinta wakhtiga iyo bacariminta, dabcinta ciidda iyo ka saarto haramaha.
Ma taqaanaa? Tufaax Kolonovidnye wuxuu ku noolaan karaa ilaa nus qarni, laakiin waxay midho dhaleen ilaa 15 sano.
Waxay dhacdaa in daryeelka tufaaxa colonka sababa dhibaatooyin beerta. Sidaa darteed, mararka qaarkood buraashka dhibciga ah ayaa waxyeelley, taas oo ah meesha koritaanka ee geed oo leh hal garab oo aan lahayn taaj. Sababta ugu badan ee waxyeelladu gaarsiisan tahay waa mid barafoobay.
Dhimashada kelyaha ayaa keeneysa kororka caleemaha "spare". Kadibna geedka ayaa kori doona gogol dhowr ah. Haddii aad rabto in ay si adag u jajabiso hal mitir, waa inaad doorataa midka ugu xoogan ee caleemaha dheeraadka ah iyo ka saar inta kale.
Waraabiyo noocyada colony
Geedaha tufaaxa xidid-qaabeeya waxay leeyihiin nidaam xidid adag, waxaa ku yaal meel u dhow dusha sare, sidaas darteed dhirta u baahan tahay qoyaan joogto ah. Habka waraabinta ayaa ka wanaagsan in la doorto dariiqa.
Waa muhiim! Waraabinta waa inay noqotaa mid dhexdhexaad ah: qoyaan xad dhaaf ah ayaa xannibaya helitaanka ogsijiinka xididdada, taasoo keeni doonta dhimashada geedka.
Haddii cimilada xagaaga ay tahay mid caadi ah, biyaha tufaaxa dhallinyarada waa inay noqdaan laba jeer toddobaadkii, haddii ay tahay isbeddel - maalin kasta, ama xitaa maalin kasta. Dhirta cayayaanka ah waxaa lagu waraabin karaa marar badan. Dhamaadka xagaaga waxaa lagu talinayaa in la joojiyo waraabinta, si loo siiyo warshadda fursad ay ku diyaariso jiilaalka.
Ma taqaanaa? Xilliga xagaaga qallalan, hal mar labadii isbuuc ee fiidkii waxaa lagula talinayaa in lagu maydho geedaha tufaaxa tufaaxa: dhererka biyaha geedaha leh tuubo, ku dayashada roobka.
Miro dharka ugu sarreeya
Ka dib markii caleemaha Bloom, dhirta u baahan tahay bacriminta. Labbiska ugu sarreeya ee geedaha tufaaxa saxarada ayaa la sameeyaa xilliga gu'ga, bilawga xilli sii kordhaya. Kadibna waa in lagu celiyaa laba jeer laba isbuuc gudahood.
Waxaa lagu talinayaa in la quudiyo:
xalka qashinka digaaga;
bacriminta isku dhafan.
Waxaa la aaminsan yahay in geedaha tufaaxa qoryaha, haddii ay si wanaagsan loo daryeelo, ayaa kori doona hal rooti, ​​iyo manjooyin aan loo baahan yahay. Tani ma aha mid run ah, tan iyo caleemaha-qaabeeya of tufaax columnar weli siiyaan.
Waxay dhacdaa in barta sii kordhaysa ay waxyeelo soo gaarto, taas oo ay sabab u tahay caleemaha cusub ee koray. Qof kastaa wuxuu go'aaminayaa sida loo sameeyo qaab alwaax.
Ma taqaanaa? Inta badan ka saaro inta lagu jiro manjooyin, si firfircoon ka badan qaybo jarjaran koraan. Haddii aad laan laydhin in ka badan kala badh, waxay ku siin doontaa caleemo dhowr ah oo xoog leh, haddii ay leedahay seddexaad oo la gooyo, waxaa jiri doona habab badan oo daciif ah oo sahlan.
Geedo tufaax ah ayaa la gooyey guga, horraanta xagaaga ama dayrta. Nidaamka oo dhan wuxuu qaadanayaa dhowr sano.
Gooyo geedkii tufaaxa, nidaamka iyo taariikhaha sanadka:
1 sano Ka saar dhammaan caleemaha dhinaca, gooyaa jirridda.
2 sano Ku dhaji caleemaha dhalinyarada ah ee gaaray 30 cm.
3 sano. U soo gaabi jeexitaanka sare ilaa 25 cm laga bilaabo jirridda, dabacsan ilaa 40 cm.
4 sano. Si dhuuban caleemaha dambe iyo aan joogto ahayn sannadkii hore.
5 sano. Geedka gaabin. Heer dherer ah 3 mitir ayaa lagula talinayaa.
Sannadaha soo socda. Ka saar caleemaha daciifka ah iyo kuwa la qalajiyey.
Waa muhiim! Gooyo roodhida columnar waxay kicisaa dhalidda iyo koritaanka laan cusub.
Sida loo dhajiyo geed tufaaxa:
Iska yaree laamaha waa inuu leeyahay laba kuul oo salka ku yaal. Qalabeynta soo saar dhar cad oo nadiif ah xagasha 45 digrii mitir mitir keli ah. Waxay ku haboontahay in ay ku barato lafaha aan loo baahnayn.
Dalaggu wuxuu doorbidaa caleemo da'diisa ka yar hal sano.
Si firfircoon u kordhaya caleemaha aan loo baahnayn ee dhexda dhexe ee xagaaga si loo xoqo.
Rixi caleemaha qulqulaya, inta soo hartey si aad u noqotid isku xidhka miraha dhali doona.
Isku-boodhka dhirta colonada ah
Iyadoo ay sabab u tahay nidaamka xididada qalafsan, geedaha tufaaxa qoryaha, marka lagu daro waraabin badan, waxay u baahan yihiin ilaalin biyaha uumi biyaha ee ciidda. Xalka wuxuu noqon karaa mulching humus ama peat. Doorashada ugu fiican waa tincture ee wareegga wheel.
Iyada oo habkan, meesha agagaarka geedka waxaa lagu beeray geedo ama cereals. Daboolka daaqsinka ah ayaa ka soo baxaya dhulka qoraxda, mana aha mid tartan u leh tufaaxa sababta oo ah xididdada ilkaha. Si kastaba ha ahaatee, waa in si joogto ah u khafiif ah, haddii ay tahay geedo yaryar, oo qashin, haddii cawska.
Laga soo bilaabo tirada badan ee ugxan, kaas oo soo saara tufaax columnar ah, waa suurtagal in la helo goosashada buuxa.
Haddii geedka tufaaxu uu ubaxo sanadka ugu horeeya, midabka oo dhan wuxuu u baahan yahay in la saaro: geedku waa mid aad u daciif ah, wuxuuna u baahan yahay xoog si loo kobciyo lana koro. Sanadka soo socda, waxaad ka bixi kartaa shan of ugxan ugu quruxda badan, sannadka saddexaad - toban.
Dhowrka dhirta tufaaxa ah waxaad kaloo soo saari kartaa ismaandhaaf midab leh iyo xayawaan, kuwaas oo aan ka qaadan karin meelo badan oo beertaada ah.
Marxaladda ubaxa ah, qiyaastii kala bar bouquets ubax ah ayaa laga saaraa, marxaladda ugxan-yar - qeyb kale oo ka mid ah bawlaha, marxaladda marka ugxan-dhererka cabbirka qaddarka, kaliya laba ka mid ah kuwa ugu quruxda badan ayaa ka tagay, marxaladda walnut - hal, ugu fiican.
Sida loo ilaaliyo geedo tufaaxa jiilaalka
Ka hor inta bilawga ah ee dhaxan xilliga qaboobaha waa in ay ilaaliyaan ilaalinta. Haddii jirridda geedka lagu qallajiyey caws, waa in laga saaraa, waxay diirimaad ku noqon doontaa ma aha oo kaliya geedka tufaaxa, laakiin sidoo kale jiirka. Dambe ayaa sidoo kale ku qanacsan.
Waxaad dabooli kartaa balka, dhoobada, iyo waxyaabaha kale ee la heli karo. Waxa ugu muhiimsan waa in ay qalalan yihiin. Ilaalinta ugu wanaagsan ee geedku wuxuu noqon doonaa baraf dhaco, taas oo ku dhufan doonta geedka tufaaxa.
Waa muhiim! Waa in la fahamsan yahay in hawsha ugu weyn ee dhacdadu tahay ilaalinta tufaaxa qoraxdu ka soo baxdo dhaxanta waa inay ka hortagaan helitaanka qoyan iyo xakameynta xiga ee xididada, kuwaas oo ku yaal meel aad u dhow.
Si aad u ilaaliso dhibicda sii kordhaysa ee laga bilaabo barafka, waxaa lagu talinayaa in lagu duubo dhowr lakab oo ah maro ama warqad.
Si dabayshu u jabto ma jabin geedka, waa ku habboon tahay in lagu xiro taageero.
Faa'iidooyinka iyo khasaarooyinka beeritaanka geedaha tufaaxa ee sababa
Faa'iidooyinka ka mid ah dhirta tufaaxa tiirbaaxsan waa shaki la'aan:
suurtogalnimada in la koro ilaa darsin kala duwan oo tufaax ah oo ku yaala goob ay qaadanayaan hal geed oo tufaax ah oo caadi ah;
iska caabinta cayayaanka;
qurxinta iyo asalka muuqaalka.
Dhibaatooyinka waxaa ka mid ah:
dhibcaha dhibcaha kobaca;
xididada daciifka ah
waqtigii loogu talagalay, daryeel joogto ah oo aad u wakhti badan leh;
Beeraley kasta, ka dib akhrinta maqaalka iyo miisaaminta ficilada iyo khasaarooyinka, waxay ka dhigi doontaa fekerkiisa ku saabsan geedaha tufaaxa ee dambiilaha. In ay taranta, waxaa jira faa'iidooyin iyo faa'iido ku filan, iyada oo ku xidhan waxa loo tixgeliyo sida.
Shaki kuma jiro in ay lagama maarmaan tahay in la isku dayo, haddii aad rabto inaad ugu yaraan leedahay hal geed oo tufaax ah sida beertaada. Waxay u badan tahay in tufaaxa suubban, iyada oo aan loo eegin sida ay dhib ugu tahay inuu beerto iyo daryeellaa, wuxuu si deeqsinimo leh dib ugu bixin doonaa daryeelka oo leh muuqaal qurxin iyo goosashada deeqda badan.